1 Chivabvu 2017
Nyanzvi dzezvematongerwo enyika dzinofanirwa kunge dziine zvinhu zvakanaka uye ruzivo kusimbisa nekugadzirisa zvinhu zvakagadzirisa zvinhu zvinopa simba kumagetsi ekutungamirira bhizinesi. Kubvumirwa kweMCSE Kubudirira kunopa IT geniuses mukana wokutsigira zvakasiyana-siyana zvinoratidzwa nezvimwe zvezvinhu zveMicrosoft zvakanyanya, kusanganisira SharePoint, Skype yeBusiness, uye Exchange Server. Kakawanda, chisimbiso che MCSE Chikuita chinogonesa vadzidzi kuti vave nezviremera, somuenzaniso, sachigaro mukuru wekugadzirira, mutariri weTV, mutariri wehurongwa, mukuru wehutano hunyanzvi, uye ichangova kutanga.
Bhuku reMicrosoft Certified Solutions Expert (MCSE) Rutsigiro rwekubudirira rinovimbisa kuti vadzidzi vane zvavanotarisirwa kuti vaite sangano kune gore, kuwedzera kwekambani kunobatsira uye kugadzirisa, kugadzirisa ruzivo rwakashata, nekuwedzera kusachengetedzwa kwemashoko. Iko MCSE: Kubudirira, kwakafanana nehutano hwose hwehutsika pasi peMicrosoft yekugadziriswa kwechigadziro, kunoita kuti vadzidzi vatarise pane dziva rekuongororwa kuti vabudirirezve kugutsikana kwavo kune zvavanoda.
Saka kuti uwane kukodzera ku MCSE: Kubudirira kwekugadzirisa, vadzidzi vanofanira kutanga vatora MCSA: Office 365 kana MCSA: Windows Server 2012 kusimbisa sechinhu chinokosha. Zvichizoitika kukunda chibvumirano chinokosha, vadzidzi vanofanira kutora mimwe miedzo yekuwedzera kuti vape MCSE: kugutsikana kwekugadzira.
Iyo MCSE: Kubudirira kwekuongorora gadzi rinoumbwa nemaminisere masere, mamwe acho anotsigirwa ne CBT Nuggets kugadzirira.
Kuronga uye Kuderedza Microsoft Exchange Server 2016 (70-345)
Kutarisa Microsoft SharePoint Server 2016 (70-339)
Kutumira Enterprise Voice ne Skype yeBusiness 2015 (70-333)
Core Solutions ye Microsoft Skype yeBusiness 2015 (70-334)
Core Solutions ye Microsoft SharePoint Server 2013 (70-331)
Advanced Solutions Solutions ye Microsoft SharePoint Server 2013 (70-332)
Zvinyorwa zvitsva zve Microsoft Exchange Server 2013 (70-341)
Advanced Solutions Solutions ye Microsoft Exchange Server 2013 (70-342)
The MCSE: Kubudirira kwehutano, hunoendeswa mu2016 sechinzvimbo cheMDCSE: SharePoint, MCSE: Kukurukurirana, uye MCSE: Kubvumirwa kwemishumo, iyo yakasunungurwa muna March 31, 2017.
Nguva dzose, vadzidzi vanotsvaka mushure mehutano hwezvenyanzvi vanofanira kunge vane zvitatu (3) kana mamwe makore ekuziva kushanda kweMicrosoft, kunyanya Office 365 kana Windows Server 2012 (kana 2016).
Izvo zvinotevera zvinongororwa zvakajeka zvikamu zvakakosha pamusana pekuongorora kwose mumvura yezvimwe nzira dzinogadzira MCSE: Kugadzirwa kwekubvuma.
Nguva yakagadzirirwa kuongorora: 2 maawa (120 maminitsi) pakuongorora
Nhamba yekubvunzurudza: 40-60 * pamubvunzo mumwe nomumwe
Kupfuura chikamu: 700 ** pakuongorora imwe neimwe
Mamwe mazita: Mazano mazhinji; Zvisarudzo zvakasiyana-siyana / mhinduro dzakawanda; mamiriro ezvinhu
Ongororo yekunyora: Microsoft Learning kana Pearson View
Zvingava zvakanaka kana iwe ukatora maonero ezvo MCSE: Kuongorora kwekugadziriswa kwekugadzirisa kunogona kuwanika kune inotumirwa kutumira paIndaneti.
Kuongorora mari: $ 165 (USD) pakuongorora
Maitiro akaenzana: Peji imwe neimwe yekunyorwa kwekutsvaga pawebsite yeMicrosoft inopa ruzivo rweMagetsi Kuenzaniswa (pfuma yakasununguka) kuti uchengetedze kuongorora nekugadzirira kwako.
* Microsoft haina kugovera nhamba yakakodzera yemibvunzo yakabatana nemayesheni ayo. Saizvozvowo, huwandu hwekubvunza mudzidzi huchaona hunosiyana pane nyaya-ne-nyaya.
** Nokuti huwandu hwekubvunza hunosiyana, hazvisi zvechokwadi kuti vadzidzi vanofanira kutora chikamu che70 chepakati kuti vapfuure kuongorora.
Miedzo yeMicrosoft ine ruzivo rwekuongorora. Vadzidzi vazhinji vanoona kuti vanoda kutora kuongorora kanopfuura kamwe kuti vaite chigumisiro chinobudirira. Nenzira yakajeka, Microsoft inonyatsoziva nezvehutano hwehutano hwakaenzana nemuedzo wavo, uye nguva dzose inopa Test Replay, iyo inoita kuti vadzidzi vadzokezve kuongororwa pamari shoma yemari. Kana zvisiri dambudziko rakawandisa kuverenga kuti Test Replay haigoni kuwanikwa. Sekuda kwemazuva ano ekuparidzirwa kwemazuva ano, imwe neimwe yeongororo yakabatana ne MCSE: Kubudirira kunosanganisira Exam Replay, zvisinei izvo zvingachinja. Vadzidzi vanofanira kutsvakurudza Exam Replay kugona kubvisa kudarika mukana mukuru wemukova wakazaruka.
Microsoft MCSE chibvumirano chakakodzera kwenguva yakareba. Sezvinoratidzwa naMicrosoft, kuongororwa kwekudzokorora kwakafanana nekusvika zvino kune vose MCSE uye MCSD dzinodanwa mukurumbira. Recertification miti inovhara zvinhu kubva kuongororo dzakatorwa kuti dzitange kuwana ruzivo, nekunyorera zvakananga pamusoro pezvinhu zvitsva zvitsva uye kuchinja kwehutano. Nekutsvaga kwekutsvaga sarudzo yekuenderera mberi nekurairidza, vadzidzi vane mukana wekutora kuongorora kusarudzwa kwekusarudza kwavo gore negore kuti "vapezve" husimbiso.
Iyo MCSE: Kubudirira inzira yehutsigiri hwehutano, kunyange zvakadaro sekutengeserana kwakatengeswa, vatadzi vanogona kuwedzerazve zvinyorwa zvavo kana kuti vanodha zvakanyanya zvakanyanya muhumwe humwe hweMicrosoft zvinotsigira sezvinotevera.
Mukati meMicrosoft universe, MCSE: Kubudirira kunobva mukugadzwa kwe MCSA: Windows Server 2012 uye MCSA: Office 365 kubvumirana, kupa vadzidzi zvishomanana zvakagadziriswa zvisarudzo:
MCSA: Office 365 (inosanganisira miviri miviri: 70-346 uye 70-347)
MCSA: Windows Server 2012 (inosanganisira zvitatu kuongororwa: 70-410, 70-411, uye 70-412)
MCSA: Windows Server 2016 (inosanganisira zvitatu kuongororwa: 70-740, 70-741, uye 70-742)
MCSA: Windows 10 (inosanganisira miviri miviri: 70-697 uye 70-698)
MCSE: Kubudirira (tarisa mazano aya: Exchange Server 2016 kana 2013, SharePoint Server 2016 kana 2013, kana Skype yeBusiness)
MCSE: Cloud Platform uye Infrastructure (ona zvinyorwa izvi: Azure, Cloud Data Platform, Big Data Analytics, Windows Server 2016, Infrastructure Server, kana Private Cloud)
MCSD: App Builder (tsvaga izvi zvakagadzirwa: Azure, Universal Windows Platform, SharePoint 2013, kana Visual Studio)
Vadzidzi vanowana MCSE: Kuburitswa kwekugadzira kunowanzova sysadmins, uye sevatungamiri vehutungamiri, pane nguva yakawanda yekudiwa kwemashoko uye mano anowanikwa nehutano hwakasununguka uye kugadzirisa. Saka, kunze kwenyika yeMicrosoft, vadzidzi vanowanzowedzera kuwedzera:
CompTIA Linux + uye LPI LPIC-1 (inosanganisira miviri miviri: LX0-103 uye LX0-104)
VMware vSphere 6 Nheyo (dzinosanganisira kuongorora kumwe chete: vSphere 6 Foundations 2V0-620)
LPI LPIC-2 (inosanganisira miviri miviri: 201-400 uye 202-400)
VMware vSphere 6 VCP6-DCV (inosanganisira kuongororwa kumwe chete: VCP6-DCV)
Payscale.com inopa bhuku rekubhadhara remubatsiro rekubatsira vadzidzi vanosarudza zvikwereti zvakakodzera zvekubhadhara zvekuvhura kwebasa rakabatana neCSSE. Payscale.com inorondedzera kuwanda kwekubhadhara pakati pe $ 50,075 uye $ 144,966 yeIndaneti nyeredzi dzinobata chero kubvumirwa kwe MCSE, kusanganisira MCSE: Kubudirira. Zvikamu izvo zvinogara kune avo vane chibvumirano che MCSE chinosanganisira mutariri weTI, mukuru weT IT, mutungamiri wezvigadziriswa, uye masangano makuru ekuvaka.
Mvumo yeMicrosoft inoratidzika sepiramidi, uye imwe neimwe yevimbiso inotyaira vadzidzi kune zvakakwirira, zvakanyanya, zvakaoma. Pasi pepiramidhi yeMicrosoft, nyanzvi dzeTI dzinovaka kusimbisa kwekudzidza neMTA (Microsoft Technology Associate). Nhamba inotevera ndeyo MCSA (Microsoft Certified Solutions Associate) uye MCSD (Microsoft Certified Solutions Developer), iyo inosanganisira zvizhinji zvakajeka pakati pevadzidzisi veIt inopiwa neMicrosoft, kusanganisira Server 2012, Office 365, uye Azure. Pakupedzisira, MCSE (inonzi Microsoft Certified Solution Expert) inotaura nezvakawanda zvakawandisa zvekubvumirwa kunopiwa neMicrosoft uye inopa vadzidzi mukana wekugadzira mararamiro anowanikwa neDMSA level level.
Sezvo Microsoft inoratidzira iyo, chibvumirano chitsva che MCSE uye MCSD (MCSE: Cloud Platform uye Infrastructure, MCSE: Mobility, MCSE: Data Management uye Analytics, MCSE: Kubudirira, uye MCSD: AppBuilder) inogadziriswa kuCenters of Excellence, inoshandiswa neMicrosoft Partner Network kuti isiyanise unyanzvi hwakakosha husinganzwisisiki nevose veMicrosoft pamwe nevatengi. Izvi zvikwangwani hazvina zvekudzoka zvakare. Pane kudaro, zuva rekuzadzikisa rinoratidza kuti iwe unoramba uchiziva sei kuchinja kune zvitsva.
Gore roga roga, une mukana wekudzorera kubvumirwa nekupedza mutsva kubva kumusana we electives, kuratidza kufarira kwako pakuwedzera kana kuwedzera unyanzvi hwako mune imwe nzvimbo yeCent of Excellence. Nguva imwe neimwe paunowana kubvumidzwa, imwe ndima inotsigira inowanikwa pane yako. Iyi nzira inotsiva ikozvino kugadziriswa kudikanwa kwekutora imwe nguva yekuongororazve nguva dzose (MCSD) kana kufanana newadhickwork (MCSE) kuchengetedza kubvumirwa kwako kubva pakufamba kwenguva. Tora zvakawanda maererano nehutano hutsva hweMicrosoft.
Tanga kutsvaga mamwe maMicrosoft akagadzirira nekugadzirisa dzimwe nzira yekuzarura kuwedzera kwevadzidzisi vekuvandudzwa kwevadzidzi.
Iyo MCSE: Kugutsikana kwekubudirira kunoratidza unyanzvi hwako nekunzwa kwebasa pamusoro pekudzidza nekuenderera mberi nekugadzirisa kwekufambira mberi kweMicrosoft, kusanganisira zvinhu zvakawandisa, somuenzaniso, Exchange Server, Skype yeBusiness, uye SharePoint. Ichi chisimbiso chinowedzera sehuchapupu hwehuchokwadi hwako uye kukwanisa kutarisira zvinhu zvekushanda kwezvinhu zvakasikwa. Wako MCSE: Chirongwa chekubudisa michina chichazarura ruzivo rwemashoko asinganzwisisiki masuo akazaruka sezvaunenge uchiedza kukwanise zvinangwa zvako.
Icho Chiitiko Chinofanira Kugoverana Chikamu Chebasa: Kutarisira & Kuvandudza